I-Rabies Vaccine, I-Rabies Vaccine, I-Vaccinous Rabies Vaccine, I-Stable Rabies Vaccin
IiRabies Vaccine,I-Vacry Rabies Vaccine,Isigulana seRabies,I-Stable Rabies Vaccine Usetyenziso lwabantu,,
Changchun BCHT Biotechnology Co. [Jilin,China] Uhlobo lo shishino: Manufacturer Main Mark: Asia Ngaphandle: 1% - 10% ICredit: GMP Inkcazo: IiRabies Vaccine,I-Vacry Rabies Vaccine,Isigulana seRabies,I-Stable Rabies Vaccine Usetyenziso lwabantu,,
Home > Imveliso > I-Rabies Vaccine Usetyenziso lwabantu > Iimveliso ezigqityiweyo
Iintlobo zeMveliso ze- Iimveliso ezigqityiweyo , singabakhiqizi abakhethiweyo baseChina, IiRabies Vaccine , I-Vacry Rabies Vaccine ababoneleli / umkhiqizo, iimveliso eziphezulu zexabiso eliphezulu ze-R & D kunye nokuvelisa, sinemisebenzi epheleleyo emva kokuthengisa kunye nenkxaso yobuchwepheshe. Khangela phambili ekusebenzisaneni kwakho!
I-Rabies Vaccine (i-Vero Cell) kwimveliso yokusetyenziswa kwabantu
I-World Health Organisation ikhuthaza ukuba kugonywe kulabo abasengozini enkulu yesi sifo kuquka nabantwana abahlala kwiindawo eziqhelekileyo. Amanqanaba amathathu anikezelwa kwiinyanga ezili-nye. Ukungakhuselekanga okulandela ikhosi yezilingo...
Izifo zeRabies Vaccine Usetyenziso lwaBasebenzi
① Abantu ngabanye bajojowe nge-rabies immunoglobulin okanye i-rabies antiserum inyanga enye ngaphambi komhla wokufumana i-rabies vaccine. ② Abo bane-immunodeficiency. ③ Abo bafumana unyango lwe-immunosuppressive (kuquka i-drug of pestima). ④ Abantu...
Iimveliso ezigqityiweyo ze-Rabies Vaccine
[Administration and osage d] (1) I-muscle ye-deltoid yengalo engaphezulu yindawo ephakanyisiweyo yokulawula i-intramuscular im. Kwabantwana abancinci, banciphise isitofu kwisisipha kwisimo se-anteroexternal of the thigh. (2) IShedyuli yokugonywa...
I-Rabies Vaccine (i-Vero Cell)
[ Usebenze kwaye u se] Umkhiqizo unokubangela ukukhusela ukulwa ne-rabies virus kwi-receptors emva kokugonywa. Isetyenziselwa ukuthintela izidlova. [Inkcazo s ] 1.0 ml nganye. 1.0 ml nganye kwimizuzu yomntu omnye. Ukugonywa kwe-rabies vaccine...
Izigulane zeRabies zokuSebenzisa abantu
[ Inkcazo ] Ukugonya kuyilungiselelo lokusetyenziswa kwamanzi elenziwe kwi-rabies engagwenywanga igciwane (aGV). Intsholongwane ikhula kwiiseli zeVero ezikhutshwe kwii-microcarriers. Emva kokulima kunye nokuvuna, ukunyuswa kwegciwane kugxininiswe,...
Ikampani yokuqala ikhula kwaye isebenzisa iteknoloji ye-microcarrier bioreactor yokuvelisa i-Rabies Vaccine (i-Vero Cell) yokusetyenziswa kwabantu kwiChina. Inkqubo yokukhulisisa inokuphindaphinda kakuhle, umveliso ubonisa umgangatho onokwethenjelwa...
Uluhlu lweMveliso ezinxulumene noko: IiRabies Vaccine , I-Vacry Rabies Vaccine , Isigulana seRabies , I-Stable Rabies Vaccine Usetyenziso lwabantu , Rabies Vaccine